Nayakhabar.com: संघीय नेपाल ६ प्रदेशको, तपाई कुन प्रदेशमा ?
संघीय नेपाल ६ प्रदेशको, तपाई कुन प्रदेशमा ?
दलहरुबीच प्रदेशका सीमा सीमांकन मा समेत ‘मोटामोटी’ सहमति जुटेको नेताहरुले बैठकपछि बताएका छन्।
‘प्रदेश मिलाउँदा केही जिल्ला टुक्र्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ कांग्रेस उपसभाति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सबै विकल्पमा छलफल भएको छ। टुक्र्याउँदै नटुक्र्याउने भन्ने सहमति भएको होइन। बाँकी रहेका विषयमा भोलि ९बिहीबार० बिहान छलफल गरेर टुंग्याउँछौं।’
‘अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गर्यौंर,’ भट्टराईले भने, ‘करिब–करिब सबै विषयबस्तु टुंगो लगाएका छौं। प्रस्तावनादेखि नामसम्म अद्योपान्त छलफल गरेर टुंगो लगाएका छौं। केही बाँकी सानातिना विषयमा अझै १र२ घन्टा समय लाग्ने भएकाले भोलि बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि बसेर टुंगो लगाउँछौं। सम्भव भएसम्म बेलुका नभए पर्सि शुक्रबार बिहानसम्म संविधानसभामा पेस गर्छौं।’
Posted by Kalpana at 04:20